GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
E ji ịgbasa ozi ọma mara Ndịàmà Jehova. Ma, ị̀ ma na n’ebe niile n’ụwa, anyị na ndị mmadụ na-amụ Baịbụl?
N’afọ 2014, Ndịàmà Jehova dị ihe karịrị nde mmadụ asatọ, ha bikwa n’ihe karịrị narị mba abụọ na iri anọ. Ha na ihe fọrọ ntakịrị ka ọ bụrụ nde mmadụ itoolu na narị puku mmadụ ise mụrụ Baịbụl kwa ọnwa. * E nwere ihe dị ka otu narị mba na iri anọ ọnụ ọgụgụ ndị anyị na ha na-amụ Baịbụl karịrị ndị bi na nke ọ bụla n’ime ha.
N’afọ ọ bụla, Ndịàmà Jehova na-ebipụta Baịbụl, akwụkwọ, magazin, na ihe ndị ọzọ ha ji akụziri ndị mmadụ Baịbụl. Ha na-ebipụta ihe ndị a ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ otu ijeri na narị nde ise. Ha na-ebipụtakwa ha n’ihe dị ka narị asụsụ asaa. Otú a ha si agba mbọ ebipụta ọtụtụ akwụkwọ n’ọtụtụ asụsụ na-eme ka ọ dịrị ọtụtụ ndị mfe ịmụ Baịbụl n’asụsụ ọ bụla ha chọrọ.
Otu nwoke onye Saụt Afrịka aha ya bụ Katlego kwuru, sị: “Mgbe m na-aga akwụkwọ, anaghị m enwe mmasị ịmụ ihe. Ma, ihe mụ na Ndịàmà Jehova na-amụ na-atọ m ezigbo ụtọ. Ihe ndị m na-amụta na-emekwa ka obi ruo m ala.”
Otu nwaanyị onye Meksiko aha ya bụ Bertha kwuru, sị: “Ọ bụ mgbe mụ na Ndịàmà Jehova na-amụ Baịbụl ka m matara azịza ajụjụ m niile, matakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ.”
Otu nwoke onye Brazil aha ya bụ Eziquiel kwuru, sị: “Ndịàmà Jehova na-abịa n’ụlọ m amụrụ m ihe n’oge dị mụ mma. Otú a ha si eme ya na-eme m ezigbo obi ụtọ.”
Otu nwaanyị onye Ọstrelia aha ya bụ Viniana sịrị: “Mgbe ụfọdụ, anyị na-eji ihe dị ka nkeji iri na ise ma ọ bụ nkeji iri atọ amụ ihe. Mgbe ụfọdụkwa, anyị na-anọfe nkeji iri atọ. Ma, ọ bụ mgbe ọ bụla dị mụ mma ka anyị na-anọru.”
Otu nwoke onye Bene Rịpọblik aha ya bụ Aimé kwuru na ‘ya akwụghị ụgwọ ọ bụla maka ọmụmụ ihe ahụ, nakwa na ọ tụrụ ya n’anya.’
Otu nwaanyị onye Nọtan Ayaland aha ya bụ Karen kwuru, sị: “Onye kụziiri m Baịbụl nweere m ndidi, dịrịkwa obiọma. O mere ka mụ na ya dịrị n’ezigbo mma.”
Otu nwoke onye Ịngland aha ya bụ Denton sịrị na “o nwere ọtụtụ ndị na-amụcha Baịbụl ma ha anaghị aghọ Ndịàmà Jehova.”
AZỊZA AJỤJỤ NDỊ MMADỤ NA-AJỤKARỊ GBASARA OTÚ NDỊÀMÀ JEHOVA SI AMỤ BAỊBỤL
Olee otú unu na ndị mmadụ si amụ Baịbụl?
Anyị na-ahọrọ otu isiokwu ma leba anya n’amaokwu Baịbụl ndị kwuru gbasara isiokwu ahụ. Iji maa atụ, Baịbụl zara ajụjụ ndị dị ka: Ònye bụ Chineke? Olee ụdị onye ọ bụ? Ò nwere aha? Ebee ka o bi? Anyị na Chineke ò nwere ike ịdị ná mma? Ihe na-esiri ụfọdụ ndị ike bụ ịmata ebe azịza ajụjụ ndị a dị na Baịbụl.
Anyị na-ejikarị akwụkwọ a na-akpọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? enyere ndị mmadụ aka ịmata azịza ajụjụ ndị a na Baịbụl. * A haziri akwụkwọ a otú ọ ga-enyere ndị mmadụ aka ịghọta ihe ndị dị na Baịbụl. E dere ihe gbasara Chineke, Jizọs Kraịst, mbilite n’ọnwụ, ihe mere ndị mmadụ ji ata ahụhụ, otú e si ekpe ekpere, nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ n’akwụkwọ a.
Olee ebe a na-anọ amụ ihe a, oleekwa oge a na-amụ ya?
A ga-anọ n’ebe ọ bụla dị gị mma nakwa n’oge ị chọrọ.
Awa ole ka ọmụmụ ihe a na-ewe?
Anyị na ọtụtụ ndị na-eji ihe dị ka otu awa amụ Baịbụl kwa izu. Ma, ọ bụghị iwu na ọ ga-eru otu awa. Ọ bụ mgbe ị chọrọ ka a mụruo ya ka anyị ga-amụru ya. Anyị na ụfọdụ ndị na-amụ ihe naanị nkeji iri ma ọ bụ nkeji iri na ise kwa izu.
Ego ole ka a na-akwụ maka ọmụmụ ihe a?
Anyị anaghị ana mmadụ ego maka ịmụrụ ya ihe, o nweghịkwa onye anyị na-asị kwụọ ụgwọ akwụkwọ anyị na ya ji amụ ihe. Ihe a anyị na-eme dabara n’ihe Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya. Ọ gwara ha, sị: “Unu natara n’efu, na-enyenụ n’efu.”—Matiu 10:8.
Afọ ole ka ọmụmụ ihe a na-ewe?
E nweghị afọ ole a kapịrị ọnụ. Ọ bụ gịnwa ga-ekpebi mgbe ị chọrọ ka anyị na gị mụruo ya. E nwere isiokwu iri na itoolu n’akwụkwọ anyị bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ị chọọ, i nwere ike ịmụcha isiokwu ahụ niile ma ọ bụkwanụ gị amụọ ụfọdụ n’ime ha. Anyị na gị ga-eji nwayọọ nwayọọ na-amụ isiokwu nke ọ bụla otú ọ na-agaghị enye gị nsogbu.
Ọ̀ bụ iwu na m ga-ekweta ịghọ Onyeàmà Jehova?
Mba. Anyị anaghị amanye onye ọ bụla ikweta n’ihe anyị na ya na-amụ. Ma, ọ bụrụ na mmadụ aghọta ihe Baịbụl na-akụzi, ọ ga-enyere onye ahụ aka ịma ihe o kwesịrị ime.
Olee otú m ga-esi matakwuo ihe Ndịàmà Jehova na-akụzi?
Ị gaa na www.jw.org/ig, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe Ndịàmà Jehova kweere nakwa ihe dị iche iche ha na-eme.
Olee otú m ga-esi agwa unu na m chọrọ ka unu bịa mụwara m Baịbụl?
Gaa na www.jw.org/ig. I lee anya n’ala ala, ị ga-ahụ ebe e dere “Gwa Anyị Ka Anyị na Gị Mụwa Baịbụl.” Ị pịa ya, ị ga-ahụ fọm ị ga-eji gwa anyị ka anyị na gị mụwa Baịbụl.
I nwekwara ike ịgwa Onyeàmà Jehova ọ bụla ị hụrụ na ị ga-achọ ka a bịa mụwara gị Baịbụl.
^ para. 4 Anyị na-amụrụ ndị mmadụ ihe n’otu n’otu. Ma, o nwekwara mgbe anyị na-amụrụ mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa ihe n’otu mgbe.
^ para. 9 Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya. E bipụtala ya ihe karịrị narị nde abụọ na nde iri atọ nakwa n’asụsụ narị abụọ na iri isii.
OTÚ ỊMỤ BAỊBỤL SI ABARA EZINỤLỌ URU
Eziquiel sịrị: “Mgbe nwunye m na Ndịàmà Jehova malitere ịmụ Baịbụl, achọpụtara m na àgwà ya gbanwere. Ihe bịara na-agakwu ọfụma n’ezinụlọ anyị. Mụ na Ndịàmà Jehova malitekwara ịmụ Baịbụl ka m mata ihe nwunye m na-amụta mere o ji gbanwee. Ihe m mụtara mekwara ka mụnwa bụrụkwuo ezigbo mmadụ. Ịmụ Baịbụl emeela ka ezinụlọ anyị na-emekọkwu ihe ọnụ.”
Karen kwuru, sị: “Mgbe m malitere ịmụ Baịbụl, akwụsịrị m ịṅụ ọgwụ ike, kwụsị ịṅụbiga mmanya ókè, mụtakwa ịna-ejide onwe m ma a kpasuo m iwe. Ụlọ m anaghịzi adị ghaa ghaa ghaa. Ahụkwuola m ndị ezinụlọ m n’anya, m na-agbalịkwa eme ha obi ụtọ. Obi na-abụzi m sọ aṅụrị ugbu a.”
Viniana kwuru, sị: “Ụfọdụ ndị gwawara m okwu ọjọọ maka na mụ na Ndịàmà Jehova na-amụ Baịbụl. Ma, di m sị m mụwa Baịbụl m na-amụ, ihe ọ sọrọ ndị mmadụ ha kwuo. Ọ sịrị na ihe ọ ma bụ na otú m si akpa àgwà ugbu a amaka. Ezinụlọ anyị adịkwala n’udo ugbu a karịa otú ọ dịbu.”